Wararka - Cudurka faafa ma dhamaan doono dhowaan.
"Dilaacitaan aduunka oo dhan ah
Kuma dhamaan doono 1-2 sano ”
Taajka cusubi wuxuu si tartiib tartiib ah ugu beddeli karaa cudur faafa oo neefsashada xilliyeed u dhow hargabka, laakiin waxyeeladiisa ayaa ka weyn hargabka. ” Subaxnimadii hore ee Diisambar 8, Zhang Wenhong, agaasimaha Waaxda Cudurada faafa, Isbitaalka Huashan, Jaamacadda Fudan, ayaa ka sheegay Weibo. 7-dii, Shanghai waxay ku dhawaaqday natiijooyinka raadinta ee 6-da kiis ee la xaqiijiyay ee maxalliga ah ee la soo sheegay inta udhaxeysa Noofambar 20 iyo 23. Goobaha halista dhexdhexaadka ah dhammaantood waa la furay kadib laba toddobaad oo la xiray. Dunida wali xiran ayaa si tartiib tartiib ah u noqotay mid kudhagtay dhammaan noocyada wararka, rajada laga qabo kahortaga cudurrada faafa sidoo kale waxay umuuqataa mid degan, laakiin dhacdooyin dhowr ah ayaa muujiyay xaalado suuragal ah oo isweydaarsiga adduunka sanadka dambe. Sida loo fuliyo is-weydaarsiga caalamiga ah marka la eego aafada
Marka laga hadlayo isku ekaanshaha u dhexeeya Bandhigga Caalamiga ee Soo Dhoofinta ee Shanghai iyo istiraatiijiyadda ka hortagga aafada ee Ciyaaraha Olambikada Japan, Zhang Wenhong wuxuu sheegay in ugu horreyntii, Nofeembar 10, Bandhigga Caalamiga ah ee Soo-dejinta ee Shanghai si guul leh loo xiray iyadoo loo marayo maaraynta xirmooyinka. Dadka soo galaya waxay hirgeliyeen maaraynta-loop maaraynta waxayna ka baxeen wadanka kulanka kadib. Dhammaan booqdayaasha waxaa laga baari doonaa nukleic acid mana jiri doono xayiraad kale. Guud ahaan in kabadan 1.3 milyan oo qof ayaa kaqeybqaatay CIIE. Horumarkiisa guuleysta waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay sahaminta waxqabadyada ballaaran ee is-dhexgalka caalamiga ah, inkasta oo heerkiisu yar yahay.
Zhang Wenhong wuxuu soo bandhigay in usbuucii la soo dhaafay uu isweydaarsaday khabiiro muhiim u ah ka hortagga cudurrada qaranka ee Japan. Laba qaybood oo macluumaad ah ayaa mudan in fiiro gaar ah loo yeesho. Mid ayaa ah in Japan ay qaban doonto Ciyaaraha Olombikada sidii loo qorsheeyay, tan kalena waxay tahay in Japan horey u amartay tallaalka sanadka oo dhan sanadka soo socda. Si kastaba ha noqotee, ra'yi ururin ayaa soo jeedisay in kaliya 15% dadka ay leeyihiin rabitaan xoog leh oo tallaal ah, qiyaastii 60% way ka cagajiidayaan, 25% ee soo hartayna waxay si cad u sheegeen in aan la tallaali doonin. Sida Olombiggu ugu bilaaban doono duruufaha caynkan oo kale ah ma caawin karo laakiin waa fikir-kicis.
Tallaabooyinka ka hortagga cudurrada faafa ee uu ku dhawaaqay Guddiga Olombikada Japan waxay leeyihiin waxyaabo badan oo la mid ah kuwa ka socda Shanghai International Import Expo. Waa la arki karaa in tallaabooyinkani ay tusaale u noqon karaan adduunka si loo bilaabo isweydaarsiga mustaqbalka. Ciyaartoyda ka socota wadamada iyo gobolada leh cudurada faafa ee aadka u daran, waa in laga baaraa fayraska taajka cusub markay yimaadaan garoomada diyaaradaha ee Japan. Kahor intaan la helin natiijooyinka baaritaanka, ciyaartooydu waxay joogi karaan oo keliya aagga la cayimay oo ay hirgelin karaan maareynta wareegsan.
Marka la barbardhigo istiraatiijiyadda ladagaalanka cudurrada faafa ee Olombikada Japan, Ciyaaraha Olombikada Japan waxay damacsan tahay inay sameyso baaritaanka nukleerka asiidhka ee soo gelitaanka dibadda si loo daawado tartanka. Ka dib gelitaanka, ma jiri doonaan xayiraad dhaqdhaqaaq iyo karantiil soo galid ah, laakiin waddada soo-gelitaanka kadib APP waxay u baahan tahay in la rakibo. Mar haddii kiis dhaco, ka hortag sax ah iyo xakameyn ayaa loo baahan yahay. Istaraatijiyadaha lagula soconayo dhammaan xiriirada dhow iyo qaadista tallaabooyinka ka hortagga cudurrada faafa ee u dhigma. Tani waxay la mid tahay ka hortagga iyo istaraatiijiyadaha xakamaynta ee Shanghai International Import Expo iyo cudurkan faafa ee maxalliga ah.
Kahortaga iyo xakamaynta saxda ah waxay noqon doontaa ikhtiyaar guud oo caalami ah
Zhang Wenhong wuxuu sheegay in kahortaga iyo xakamaynta saxda ah ay si tartiib tartiib ah u noqon doonto ikhtiyaar guud oo caalami ah. Dhawaan, dhowr meelood oo halista dhexdhexaad ka ah Shanghai ayaa laga xannibay. Furaha kahortaga cudurrada ee Shanghai markan waxay inta badan ku tiirsan tahay raadinta saxda ah iyo kormeerka shaqaalaynta buuxda ee meelaha halista dhexe. Tani waxay sidoo kale fursad siineysaa magaalooyinka waaweyn si loo yareeyo saameynta weyn ee ay ku yeelan karto dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyada oo loo marayo kahortag iyo xakameyn sax ah.
Iyada oo caan ku ah tallaalka, adduunku si tartiib tartiib ah ayuu u furmayaa. Si kastaba ha noqotee, sababta oo ah tallaalku waa adag yahay in si buuxda loo wada noqdo (iyada oo aan loo eegin natiijooyinka sahan ee jira ee ujeeddooyinka tallaalka shakhsiga ah ama xaqiiqda ah in wax soo saarka adduunka ay adag tahay in lagu gaaro hal tallaabo), faafidda adduunka ma dhammaan doonto 1-2 sano gudahood. Si kastaba ha noqotee, marka la eego dib-u-furitaanka adduunka iyo ka-hortagga cudurrada faafa, ka-hortagga cudurrada faafa ayaa si tartiib tartiib ah u noqon kara xulasho guud oo caalami ah mustaqbalka.
Waxa uu sheegay in macnaha guud ee furitaanka adduunka iyo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, nidaamka caafimaad ee Shiinaha ay tahay inuu si wanaagsan uga jawaabo. Ka dib marka la tallaalo dadka halista badan leh, halista taaj cusub ayaa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu noqon doonaa cudur faafa neefsashada xilliyeed u dhow hargabka, laakiin dhibtiisa ka weyn tahay hargabka. Marka la eego, cosbitaalada waaweyn waa inay lahaadaan waax kahortaga iyo ka hortaga cudurada faafa oo caadi ah, taas oo ah, waaxda cudurada faafa. Iyada oo taas laga jawaabayo, Nidaamka Caafimaadka ee Dawladda Hoose ee Shanghai ayaa shir ku qabtay Cusbitaalka Dadka ee Magaalada Shanghai dhammaadkii wiigga. Qaar ka mid ah agaasimayaasha isbitaalada ee Yangtze River Delta iyo Pearl River Delta ayaa kaqeyb qaatay doodo xamaasad leh waxayna si buuxda uga wada hadleen mustaqbalka xeeladaha ka hortagga iyo xakamaynta COVID-19. . Shiinaha wuxuu u diyaar garoobay viruska iyo mustaqbal furan.
Waqtiga boostada: Dec-08-2020